Yakanyanya Kushambadzira Mureza-Concave Kugadzira uye Fekitori Jesson Mureza Arts & Crafts
Bata Kutarisisa pane Yako Inotevera Chiitiko
Uri kutsvaga nzira yekubata maziso evapfuuri pane yako inotevera yekutengesa show kana zvimwe zviitiko? Wobva wafunga kuwedzera yakasarudzika minhenga mireza kune yako dumba. Netsika yeminhenga inoshambadzira mureza, dumba rako richamira, zvichiita kuti vanhu vamire uye vatarise. Nevanhu vazhinji vanomira panzvimbo yako, uchave nemikana yakawanda yekukumbira kutengesa.
Machira Akasiyana Ekusiyana Ekuratidza Zvinodiwa
Iko kune hombe sarudzo yemachira yesarudzo. 110g yakarukwa polyester uye 100D polyester ndiwo machira akajairwa ekudhinda mureza wekushambadzira. 110g yakarukwa polyester inokurudzirwa kuti iite-yega mativi feather mireza nepo 100D polyester inozivikanwa mukudhinda mireza-mativi mireza. Kana iwe uine zvimwe zvakakosha zvido, 115g fluorescent yakarukwa polyester, 130g inopenya yakarukwa polyester, 115g polyester uye 210D oxford inowanikwawo pakusarudza kwako.
Endesa Mharidzo Yako Nenzira Inobudirira
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveminhenga yemureza chimiro chayo chakasarudzika. Iyo concave yekushambadzira mureza, mutete dhizaini unobatsira kuti meseji yako isvitswe. Ichi chishandiso chikuru chekushambadzira kushambadza izvozvi zvigadzirwa kana sirogani kana zvipo, nekuti vanhu vari kuzozviona.
Chimiro uye dhizaini yemhando iyi yemureza inoitendera kuti ifambe zvishoma mumhepo, asi isingafambe zvakanyanya zvekuti haiverengwe. Izvi zvinoita kuti zvibudirire zvese pakubata kutarisisa uye kuzivisa ako ekushambadzira zvinangwa. Mureza unoratidzira yakajeka, yakajeka mifananidzo yakajeka uye yakajeka, uye inogara pachigadziko chakasimba chinoshanda mumba kana kunze.
Sarudza Mhenga Mireza Eakakodzera Masizi Eako Zviitiko
Isu tinopa ese akajairwa uye e Deluxe marudzi ekushambadzira mureza mireza uye marefu emireza akasiyana mireza akasiyana zvishoma. Yemhando yakajairwa, unogona kusarudza 9ft, 13ft, uye 15ft nepo saizi dzerudzi rwe Deluxe dziri 8ft, 11ft uye 16ft.